MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): December 2005
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၃ ရက်နေ့လောက်ကစပြီး မန္တလေးမှာ မိုးတွေရွာပြီး တော်တော်လေးကို အအေးပိုလာပါတယ်... ခါတိုင်း ညဖက်နဲ့ မနက်ဖက်လောက်ပဲ ချမ်းတတ်တဲ့ မန္တလေးဟာ နေ့လည်ဖက်တွေတောင် အနည်းငယ် ချမ်းလာပါပြီ...
ဒီနေ့မနက်တော့ ထူးထူးခြားခြား နှင်းများကျနေပါတယ်... အခုအချိန်ထိကို နှင်းများ အနည်းငယ်ကျနေတုန်းပါပဲ... မြူနှင်းလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ထင်ပါတယ်... ဒီနေ့မနက် (၇) နာရီ ၀န်းကျင်ကဆိုရင် ကိုယ့်ရှေ့ ပေ (၃၀) ၀န်းကျင်လောက်ကိုပဲ မြင်ရအောင် နှင်းများကျဆင်းနေပါတယ်... ကျုံးဘေးလမ်းကသွားတာတောင် မြို့ရိုးကို လှမ်းမမြင်ရပါဘူး...
Posted by MgHla Mandalay at 8:07 am
ကျောက်မဲမြို့က ကလေးမလေး တစ်ယောက်အကြောင်း ကြားပြီးကြပြီလားမသိ...
ကျတော်လည်း ဟိုနေ့ကမှ ဗီစီဒီကြည့်ပြီးတော့ တကယ်ဟုတ်မှန်ကြောင်း သိရတဲ့အတွက် မသိသေးသူတွေကို သတင်းပေးချင်လို့ပါ...
ကျောက်မဲမြို့က ၁၅ နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဟာ သေဆုံးသွားသော်လည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီး ဖြစ်မသွားဘဲ ပုံမှန် အသက်ရှင်နေသောလူတွေအတိုင်း လက်များ၊ ခြေထောက်များကို ကွေး၊ ဆန့်၍ ရခြင်း၊ မီးသညင်္ဂိုဟ်ရာတွင် သွေးအိုင်ဖြစ်ကျန်ခဲ့ခြင်း၊ သူသေဆုံးမည့်ရက်ကို ကြိုတင် ပြောသွားနိုင်ခဲ့ခြင်း စသည့်ထူးခြားမှုများတွေ့ရကြောင်းပါ...
Change PonNya_web to ZawGyi-One Myanmar Unicode Font...
Posted by MgHla Mandalay at 9:47 am
ကျတော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးကို အခု အချိန်ကစပြီး ပုည မြန်မာ ယူနီကုတ် စာလုံးအသုံးပြုနေရာမှ ဇော်ဂျီမြန်မာ ယူနီကုတ် စာလုံးပြောင်းပြီး အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို အသိပေးအပ်ပါသည် ခင်ဗျား... အရင်ရေးသားချက်များကို ဖတ်ရှုလိုပါက ပုညမြန်မာ ယူနီကုတ်စာလုံးများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်...
Posted by MgHla Mandalay at 3:42 pm
If you can raed tihs psas it on !!"
[Link] KalvinAlexanDer က ပုဂံနက် ဖိုရမ်မဋ္ဋာ မှူဝေထားတာပြ...
Posted by MgHla Mandalay at 2:10 pm
ဒီမဋ္ဋာ www.myazedi.com/press.htm င်္ိမန်မာယူနီကုတ် အတ့က် င်္အိငင်းပ့ားမ႙တေ့ ဘယ်သူမဋ္ဋန်နပီး ဘယ်သူမဋ္ဋားလဲ မသိပြ... copyright အတ့က် ၀မ်းသာနပီး ... င်္ိမန်မာ unicode အတ့က် ၀မ်းနည်းရမလားမသိ ...
Posted by MgHla Mandalay at 8:28 am
အင်း မနက်စောစောစီးစီး အလုပ်လာလုပ်ခိုင်းရင် အဲဒီနှေ တစ်နှေလုံး အလုပ်မ္လားတာ ဘာဓာတ်လဲ မသိဘူး...
ငြ တစ်ယောက်တည်းရဋ္ဋိင်္ိပန်ရင်လည်း အလုပ်မ္လားတတ်တယ်... ဘာငေ်္ီကာင့်လဲမသိ...
ဒီနှေတော့ အခန်း ရဋ္ဋင်းင်္ိဖစ်အောင် ရဋ္ဋင်းဦးမဋ္ဋပဲ... တစ်ခန်းလုံးကို ရ႙ပ်ပ့နေတာပဲလေ... အီး-အမ႙ိက်ပုံလှိုတောင် ငေ်္ိပာလှိုရတယ်...
အခန်းရဋ္ဋင်းနပီးရင်လည်း အလုပ်တေ့ လက်မလည်အောင် လုပ်ရတတ်တယ် ဘာဓာတ်လဲမသိ...
Posted by MgHla Mandalay at 3:40 pm
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ...
Posted by MgHla Mandalay at 8:21 am
မောင်ဇန်လုပ်ပေးထားတဲ့ Embedded ဇော်ဂျီ Myanmar Unicode Font ကို သုံးပြီး တင်ကြည့်တာပါ... ဇော်ဂျီ font မရှိပေမယ့်လည်း မြင်ရမယ် ထင်တယ်... မမြင်ရဘူးဆိုရင် ကျတော့်ကို ပြန်ပြောပါဦး...
Posted by MgHla Mandalay at 3:58 pm
Thanks to MgZeng
Posted by MgHla Mandalay at 5:14 pm
၄ လ င်္ိပည့်တဲ့ မေ့းနေဿ ကရိုက်ထားတဲ့ က္လတော့် သမီးလေး အေးခ္လမ်းနငိမ်းပုံပြ...
နပီးခဲ့တဲ့ စနေနှေလောက်က င်္ိဖစ်မယ် ထင်ပရြဲဿ အိမ်ကို သူခိုးဝင်မ္တွေသ့ားလေရဲဿ ... တစ်အိမ်လုံးကို စိမ်ငေ်္ိပတငေ်္ိပ ရဋ္ဋာဖေ့ထားလေရဲဿ ...ရဲတေ့ဘာတေ့တော့ ခေငြ်္ိပလိုက်သေးတယ် ... ဖောက်ထ့င်းမ႙င်္ိဖစ်နေလှိုလေ... ဘာပသြ့ားသေးလဲမေးတော့... ဘာမဋ္ဋ မပဘြူးလှိုငေ်္ိပာလိုက်တယ်... ရဲတေ့ င်္ိပန်သ့ားတော့ အိမ်ရဋ္ဋင်းတော့မဋ္ဋ ဘူးတစ်ဘူးတေ့ဿတော့မဋ္ဋ စိန်တေ့ပသြ့ားတာ သိရတယ်... စိန်တေ့ ဆိုလိုဿ အထင်မရကီးပနြဲဿ စိန်အတုတေ့ပြ...
ငေ်္ီသာ်... ကိုယ့်ဘ၀နှဲ ကိုယ်သာ င်္ိဖစ်ပစြေတော့...
Posted by MgHla Mandalay at 4:21 pm
MCC Co.,Ltd.(အမ်စီစီ ကုမ္ဏဏီ)
၁၉၈၆ ခုဋ္ဋြစ်တ့င် စတင်တည်ထောင်သည်။ Myanmar Computer Company ကိုအတိုကောက်ယူ ထားင်္ိခင်းင်္ိဖစ်သည်။ သတင်းအခ္လက်အလက် နည်းပညာနယ်တ့င် MCC က မ၀င်ရောက်သည့် အပိုင်းမရဋ္ဋိအောင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။ က့န်ပ္လတြာသင်တန်းဖ့င့်လဋ္ဋစ်င်္ိခင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားင်္ိခင်း၊ e-commerce ကိင်္စမ္လားတ့င် ပဝြင်ဆောင်ရ့က်င်္ိခင်းစင်္သိဖင့် လက်ရဋ္ဋိင်္ိမန်မြာိုင်ငံတ့င် ထိပ်တန်းက့န်ပ္လတြာကုမ္ဏဏီ င်္အိဖစ်ရပ်တည်သည်။
(MCC ၏ အရဋ္ဋည်မဋ္ဋာ ''င်္ိမန်မာ့က့န်ပ္လတြာ ကုမ္ဏဏီ လီမိတက်" င်္ိဖစ်ပသြည်။ Myanma (not MyanmaR) Computer Co., Ltd. <<<မောင်လဋ္ဋရှဲ မဋ္ဋတ်ခ္လက် )
အြုပညာ/ပန်းခ္လီ၊ ပန်းပု၊ Conceptual Art
၁၉၉၇ တ့င် ပိုပိုက solid concepts solo show အမည်င်္ိဖင့် ဒီကနှေ ခေတ်စားတ့င်က္လယ်နေသော installation Art မ္လားကို ရန်ကုန်နမြိဿ င်္ိပည်လမ်းရဋ္ဋိ ယုဒသန်ခန်းမတ့င် စတင်င်္ိပသည်။ ဇန်န၀ရြီ ၆ မဋ္ဋ ၁၂ အထိ င်္ိပင်္သိခင်းင်္ိဖစ်နပီး၊ င်္ိပက့က်ပေငြ်း ၂၀ ပဝြင်သည်။ ၂၀၀၀ င်္ိပည့်ဋ္ဋြစ်တ့င် င်္ိမမဥ္ဆြ (ယခု အမေရိကန်ြိုင်ငံတ့င် အြုပညာက္လောင်းတက်နေသူ)က င်္ိပည်လမ်း IBC တ့င် Conceptual art င်္ိပပဲ့ခင်းက္လင်းသည်။ င်္ိမမဥ္ဆကြ င်္ိပက့က် ၈ က့က်တင်ဆက်ခဲ့ သည်။ ၂၀၀၂ နောက်ပိုင်းမဋ္ဋစ၍ ရန်ကုန်တ့င်င်္ိပသသော ပန်းခ္လီင်္ိပပဲ့၏ ၃၀% တ့င် installation art မ္လားပဝြင်လာနပီး၊ performance art တင်ဆက်မ႙မ္လားလည်း ခပ်စိပ်စိပ်ပဝြင်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုဋ္ဋြစ်က္လော်က္လော်ကာလမ္လား (၁၉၈၂ ၀န်းက္လင်) တ့င်ပေဖူးလ္တွာမဂ္ဂဇင်းက ပထမဆုံးမဂ္ဂဇင်း တိုက်အတ့က်သီးသန်ှ Lay-out ဒီဇိုင်းဆရာ ခန်ှထားခဲ့သည်။ ၄င်းမဋ္ဋာ င်္ိမင့်မောင်က္လော်င်္ိဖစ်သည်။ ထိုအခ္လိန်က ခဲစာလုံးပုံဋ္ဋြိပ်စက်မ္လားတ့င် ဖိုမင် (foreman) ရကီးမ္လားဋ္ဋြင့် တဲ့ဖက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ရနပီး ၁၉၈၆-၈၇-၈၈-၈၉ ကာလ ပေဖူးလ္တွာမဂ္ဂဇင်းမ္လားသည် Lay-out ဒီဇိုင်းဆရာပဝြင်မ႙ငေ်္ီကာင့် င်္တိခားမဂ္ဂဇင်းမ္လားနဲဿ သိသိသာသာကဲ့င်္ိပားခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ တ့င်ြုပ်ရဋ္ဋင်င်္အိမတြေမဂ္ဂဇင်းက င်္ိမင့်မောင်က္လော်၏အစအဆုံး Lay-out င်္ိပလြုပ်ခ္လက် မ္လားင်္ိဖင့် တစ်အုပ်လုံး off-set ပုံဋ္ဋြိပ်သောမဂ္ဂဇင်းင်္ိဖစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတ့င် ၁၉၉၀ြ့ယ်နီမဂ္ဂဇင်းဋ္ဋြင့် မောင်က္လော်စိုး၊ ၁၉၉၁ ရနှံသစ်မဂ္ဂဇင်းဋ္ဋြင့် ဇန်ဇန်စသူတှို ပူးတဲ့ပေထြ့က်လာနပီး လက်ရဋ္ဋိအခ္လိန်တ့င်တိုက်ပိုင် Lay-out ဒီဇိုင်းဆရာမရဋ္ဋိသော မဂ္ဂဇင်းဟူ၍ မရဋ္ဋိတော့ပြ။
၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းခေတ်ပေကြဗ္လာ (Myanmar Moderm Poety at 1972)
လေးလုံးစပ်မဋ္ဋ လ့တ်လပ်ကာရန်သိုဿ ငေ်္ိပာင်းလဲသ့ားင်္ိခင်းကို မရည်္တြွန်းဘဲြိုင်ငံတကာဋ္ဋြင့် အနပိငြ် ခေတ်နပိငြ် ခံစားမ႙ဋ္ဋြင့် ခေတ် နပိင်ြနိမိတ်ပုံမ္လားသုံးနပီး ရေးဖဲ့ဿသောခေတ်ပေကြဗ္လာသည် ၁၉၇၂ သုခမိန်လိ႙င် ရေးသား ထုတ်ဝေလိုက်သော‘ဂ့္လန်လ၏မိုးရေမ္လား’ စာအုပ်က စတင်သည်။ လ့တ်လပ်ကာရန်င်္ိဖင့် ၁၉၇၂ ၏ ရေဋ္ဋဿပိုင်းတ့င် ကဗ္လာ ရေးသားသူမ္လားရဋ္ဋိခဲ့သော်လည်း ခေတ်နပိင်ြခံစားမ႙ကို ဖဲ့ဿသောကဗ္လာမ္လား မဟုတ်င်္ီက။ အတေ့းက
လေးလုံးစပ် ကဗ္လာမ္လားက ပေးသော န၀ခေတ်စမ်း (Neo - ခေတ်စမ်း) အတေ့းမ္လားသာင်္ိဖစ်သည်။
ဇာတ်ကောင်စြိုက်ကို စြိုက်သော ‘ကတ္ဒီပဖြိနပ်စီး ရ္တွေထီးဆောင်း’ ဇာတ်ကား င်္ိမန်မြာုပ်ရဋ္ဋင်တ့င် ၁၉၂၀ြုပ်ရဋ္ဋင်စတင်ခ္လိန်မဋ္ဋ ၁၉၇၆ ကတ္ဒီပဖြိနပ်စီး ရ္တွေထီးဆောင်း ဇာတ်ကား မတိုင်ခင်အထိ ဇာတ်လမ်း အသားပေးပုံစံမ္လားသာြိုက်ကူးခဲ့င်္ီကရာက ၄င်းဇာတ်ကားမဋ္ဋစတင်၍ ဇာတ် ဆောင်၏စြိုက်ကို ဖော်က္လြးသော င်္ိမန်မြာုပ်ရဋ္ဋင် ဇာတ်ကားဟူ၍ ပေထြ့က်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားကိုြိုက်ကူးသော ဒြိုက်တာမဋ္ဋာ မောင်ဝဏဉ င်္ိဖစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားဋ္ဋြင့်ပင် ထိုဋ္ဋြစ်က ဒြိုက်တာမောင်ဝဏဉြုပ်ရဋ္ဋင်ထူးခွှန်ဆု (အကယ်ဒမီ) ရရဋ္ဋိသည်။ သြုပ်ဆောင်မ္လားမဋ္ဋာ င်္ိမတ်လေး၊ င်္ိမတ်မ့န်ဋ္ဋြင့် သက်နောင် တှိုင်္ိဖစ်င်္ီကသည်။
‘ခ္လစ်လည်းခ္လစ်တယ်၊ ရဋ္ဋက်လည်းရဋ္ဋက်တယ်’ င်္ိမန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကား
၁၉၈၆တ့င် င်္ိမန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကား စတင်ထ့က်ပေပြသြည်။ ပဲ့ဦးထ့က်ဇာတ်ကားမဋ္ဋာ ခ္လစ်လည်း ခ္လစ်တယ် ရဋ္ဋက်လည်း ရဋ္ဋက်တယ်င်္ိဖစ်နပီး စတင်ြိုက်ကူးသော ဒြိုက်တာမဋ္ဋာ မောင်မိုးသူ င်္ိဖစ်ပသြည်။ ပဝြင်သောသြုပ်ဆောင်မဋ္ဋာ သုမောင်ဋ္ဋြင့် င်္အိခားသြုပ်ဆောင်ဇာတ်ပှိုဇာတ်ရံမ္လား င်္ိဖစ်ပြ သည်။
မီဒီယာ/ F.M Broadcost
၂၀၀၂ ဇန်န၀ရြီ ကစတင်ထုတ်လ္တွင့်ပသြည်။ ရန်ကုန်နှဲ မိုင် ၅၀ ၀န်းက္လင်မဋ္ဋာ ရေဒီယိုအက်ဖ်အမ် လိုင်းကနေ ဖမ်းယြူိုင်သည်။ တေးသီခ္လင်း(အထူးင်္သိဖင့် Pop, Rock သီခ္လင်း)မ္လားအဓိကထားထုတ် လ္တွင့်သည်။ ဖ္လော်ငေ်္ိဖရေး အစီအစဉ်မ္လား အမ္လြိးမ္လြိး ငေ်္ိပာင်းလဲတင်ဆက်နေ၍ ပရိသတ်ရကီးမားနပီး၊ စီးပ့ားရေး ငေ်္ီက်ာင်္ိငာဋ္ဋြင့် မေ့းနေဿဆုတောင်း လူမ႙ရေးငေ်္ီက်ာင်္ိငာမ္လားလည်း အခငေ်္ီကးငေ့လက်ခံ၍ ထုတ်လ္တွင့်သည်။ ဋ္ဋြစ်ပတ်လည်တိုင်း ဂီတစင်င်္ိမင့်ပဲ့က္လင်းပနပီး၊ တေးဂီတဆိုင်ရာ ထူးခ့္လန်ဆုမ္လားလည်း ထိုပဲ့ တ့င်ခ္လီးင်္ိမ႘င့်ပေးသည်။
၁၉၃၆ က ဆရာရကီးရ္တွေဥဒေငြ်းဋ္ဋြင့် သူငယ်ခ္လင်းင်္ိဖစ်သူ ဗ္လဟြာခင်တိုဿ ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့သော င်္ိမန်မာ့ ဗ္လဟြာဂ္လာနယ်မဋ္ဋာ အစောဆုံး ပုဂ္ဂလိကဂ္လာနယ်တစ်စောင်င်္ိဖစ်သည်။ ထိုအခ္လိန်က သတင်းစာမ္လား(ပုဂ္ဂလိကပိုင်င်္အိဖစ်) အမ္လားင်္အိပားထုတ်ဝေင်္ီက၍ အပတ်စဉ်စာ စောင်ထုတ်ရန် စိတ်ကူးမရဋ္ဋိင်္ီကခ္လိန်တ့င် ဆရာရကီးရ္တွေဥဒေငြ်းတိုဿက စတင်တီထ့င်ထုတ်ဝေလိုက်င်္ိခင်း င်္ိဖစ်သည်ဟု မဋ္ဋတ်သားရသည်။ ဖတ်စရာဆောင်းပြးမ္လားဋ္ဋြင့် သတင်းသုံးသပ်ခ္လက်မ္လားအလေးကဲ ပဝြင်သည်။